Nesorin'i Apple tsy ho ao amin'ny App Store i Fortnite ary nitory avy hatrany an'i Apple i Epic noho ny fampiharana fanoherana ny fifaninanana | Avy amin'ny Linux
Nesorin'i Apple tsy ho ao amin'ny App Store i Fortnite ary nitory avy hatrany an'i Apple i Epic noho ny fampiharana fanoherana ny fifaninanana
Taorian'ny Epic Games dia namoaka fanavaozana ho an'ny Fortnite Battle Royale izay namela ny mpilalao hisafidy ny toerana hanaovana ny fandoavany vola ary afaka mamela ny komisiona mitaky 30% takin'i Apple amin'ny ankapobeny rehefa afaka mandoa vola ao anaty ny fampiharana ianao, Nesorin'i Apple tao amin'ny App Store i Battle Royale.
Ary izao Nanambara ny Epic Games fa nandray andraikitra ara-dalàna tamin'i Apple izy hamaranana ny fameperana fanoherana ny fifaninanana misy eo amin'ny fivarotana fampiharana finday avo lenta ny orinasa.
Raha ny marina, Epic dia namolavola ny rafitra fandoavam-bola ao anaty fampiharana izay mandalo ny sarany 30% an'ny Apple izay natombony ny alakamisy. Io fanavaozana io dia mampihena be ny vidiny miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 20%, ary koa mampiditra fihenam-bidy amin'ny fandaniana rehetra amin'ny vola tena izy.
Epic dia namoaka lahatsoratra bilaogy omaly izay manazava ny fandoavana mivantana ao amin'ny Epic. Noho izany, ny orinasa dia mamely mafy an'i Apple sy Google, fa koa amin'ireo fivarotana fampiharana hafa.
Ankoatra ny App Store sy Play Store, ireo fihenam-bidy ireo dia mitombina ihany koa amin'ny fividianana amin'ny sehatra hafa, toy ny PC, Mac, Xbox, PlayStation ary Nintendo Switch.
"Tsy tolotra io… ireto misy vidiny mihena vaovao azo alaina amin'ny fotoana rehetra!" Faly izahay mampita ireo tahiry ireo aminao ary hanohy hitady fomba hafa hanomezana lanja ireo mpilalao Fortnite rehetra, ”hoy ny nosoratan'i Epic tao amin'ny tranonkala ofisialiny. Vao mainka nampirongatra ny fifandrafiana teo amin'i Apple sy ilay mpampanonta ny lalao izany.
Toy izany koa Epic dia tonga amin'ny fotoana marefo indrindra ho an'i Apple, hatramin'ny mpanamboatra iPhone miatrika olana amin'ny fifaninanana momba ny fiasan'ny App Store ary ny lalàna apetrany amin'ny mpamorona sasany.
Ny CEO an'ny orinasa, Tim Cook, dia nantsoina ihany koa hijoro ho vavolombelona nanoloana ny Kongresy amerikana tamin'ny faran'ny volana lasa teo. Na izany aza, tsy nampaninona ny orinasa loatra izany, satria tsy nisalasala vetivety handrarana ny Battle Royal, izay manandrana manararaotra ny tombony azo avy aminy.
Nanomboka teo dia nandeha haingana be ny raharaha. Taorian'ny fandraràna dia namoaka fanambarana i Apple hanazavana izany. "
Androany, Epic Games dia nandray fanapahan-kevitra tsy nampoizina hanitsakitsaka ny torolàlana App Store izay mihatra mitovy amin'ny mpamorona rehetra ary natao hiarovana ny magazay ho an'ny mpampiasa anay.
Vokatr'izany dia nesorina tao amin'ilay magazay ny fampiharana Fortnite », hoy izy. Nilaza i Apple fa vonona ny hiara-hiasa amin'ny Epic "hamaha ireo fandikan-dalàna ireo" izy ireo fa tsy mikasa ny hahita «fixe spécial» miaraka aminy.
Mandritra izany fotoana izany, Epic dia nanambara andianà fanehoan-kevitra voaisa tsara, anisan'izany ny fitoriana antitrust Natao hamarana ny ampihimamba izay efa ampangain'ny Apple App Store tsy izy ireo ihany fa avy amin'ireo mpandraharaha maro hafa koa ary misy horonantsary fanoherana nalefa tao amin'ny YouTube sy tao anatin'ny Fortnite.
Ny horonan-tsary maneso ny doka "1984" nataon'ny mpamokatra iPhone ary miantso ireo mpankafy lalao #FreeFortnite ho fanohanana ny tolona ataon'izy ireo amin'i Apple. Nilaza ity farany fa nanaiky an-kalalahana ny fepetra sy ny làlan'ny App Store nandritra ny folo taona i Epic ary tsy tokony hitarika azy hanosika fifampiraharahana manokana ireo tombotsoan'ny orinasa ireo.
Amin'ny lafiny iray, Google koa dia nanao hetsika sahala amin'izany ary nanala ny lalao tamin'ny Play Store.
Ny mpampiasa Android dia mbola afaka misintona Fortnite, na izany aza, amin'ny fampiasana ny launcher an'ny Epic azy manokana, izay zarainy tsy miankina amin'ny alàlan'ny tranonkala fitetezana finday.
“Raha mbola misy amin'ny Fortnite amin'ny Android ny Fortnite dia tsy afaka manao azy intsony amin'ny Play izahay satria manitsakitsaka ny politikantsika izany. Na izany aza, faly izahay nanohy ny dinidinika nifanaovana taminay Epic ary nitondra ny Fortnite hiverina any Play, "hoy ny mpitondra tenin'ny Google.
Amin'izao fotoana izao, ireo izay efa nisintona ny Fortnite amin'ny iOS dia mbola afaka milalao azy io, ny fisintomana vaovao ihany no tsy afa-miasa satria nesorin'i Apple tao amin'ny fivarotany ilay lalao. Ankoatr'izay, amin'ity tranga ity dia mbola azo atao ny mampiasa ny rafitra fandoavam-bola amin'ny fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nesorin'i Apple tsy ho ao amin'ny App Store i Fortnite ary nitory avy hatrany an'i Apple i Epic noho ny fampiharana fanoherana ny fifaninanana
Anderson gomez dia hoy izy:
Mampalahelo ity toe-javatra ity, fotoana izao hanazavana mazava tsara fa toy izany ny ampihimamba amin'izany fomba izany. Misaotra nizara vaovao sarobidy toy izany, arahaba: https://atencionalclienteargentina.com/
Valiny tamin'i Anderson Gomez
Farafaharatsiny Fortnite dia mampiala voly tanora maro, azoko hamafisina izany satria tao amin'ny fiarahamoniko dia nahita olona maro niresaka momba izany tsy nijanona aho tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana, tsikaritro ihany koa ny fifandraisako amin'izy ireo https://www.mintme.com nihena kely, ny volako manokana dia tsy nifampiraharaha tsara toy izany. Izany no mahatonga ahy toa tsy dia lavitra loatra amin'ny Apple ny fepetra manohitra ny Epic Games
Ny famoahana kinova Ubuntu LTS 20.04.1, 18.04.5 ary 16.04.7 dia efa navotsotra
Ratsy ny raharaha ho an'i Apple, miampanga azy ireo ho monopole ihany koa ny mpiara-manorina ProtonMail